Archive du 20171118
Fifidianana 2018 Atokisan’ny Alemana sy Frantsay i Dada
Araka ny efa nambarany nandritra ny fihaonan’ireo mpanao politika teny amin’ny Hotely Colbert dia tany Alemaina sy Frantsa Atoa Marc Ravalomanana tamin’ity herinandro ity ka nihaona tamin’ireo tompon’andraiki-panjakana avy amin’ireo firenena eoropeanina roa matanjaka ireo.
Tsiambaratelon’ny Krizy 2009 Hivoaka amin’izay …
Hanomboka hivoaka ary ho azon’ny rehetra jerena amin’izay ilay horonantsary fanadihadiana « Return of a President” ny 23 ka hatramin’ny 30 desambra ho avy izao.
Jeanne tsy laitram-bala !
Manao ahoana ry Jean a ! Mihetsiketsika mihitsy ianao tato ho ato a ! Fa ny zavatra mahagaga ahy ary efa nanontaniako hatrany dia ny hoe :
Tsy manan-kialofana eto Antananarivo Hananganana trano fonenana
Hisy ny tetikasa fananganana trano ho an’ny fianakaviana sahirana tsy manan-kialofana eto an-drenivohitra. Fantatsika tsara ny ohabolana hoe :
Seranam-piaramanidina Ivato Iranianina 3 nosamborina
Miha mitombina hatrany ny ahiahin’ny maro ny maha zava-doza ny fisian’ny zotra Turkish Airlines mampitohy an’i Tiorkia sy i Madagasikara.
Ady amin’ny fizahantany mamoafady Ho avy masiaka ny minisitera
Misy ny fizahantany mamoafady na “Tourisme sexuel” eto amintsika. Ezahina tsy hitombo sy, hoy ny minisitry ny fizahantany Roland Ratsiraka omaly.
Mponina eny ambany tanana Miantso ny depioten’i Soanierana Ivongo hiala tsiny amin-dRossy
Nanao fanambara am-pahibemaso omaly ireo mponina eny ambany tanana mikasika ilay tranga nahazo ny solombavambahoaka Rossy tany Soanierana Ivongo, nandritra ny fikasan’ity farany hanatanteraka fampisehoana tany an-toerana ny herinandro teo.
Firaketana ny mombamomba ny tany sy trano Hampiasana “logiciel” raitra ny eto Antananarivo
Nampahafantarina omaly maraina nandritry ny fivorian’ny DMR (Direction de la Mobilisabilité des Réssources) ao amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) teny Mahamasina ny mahakasika ilay fitaovana raitra sy matihanina dia ny rindram-baiko « Logiciel IFPB-IFT- V.3.0»,
Toby famokarana herinaratra 60Kw Tafapetraka any Amboasary Avaratra
Notokanan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin’ny fomba ofisialy omaly 17 novambra ny fotodrafitrasa famokarana herinaratra amin’ny alalan’ny riandrano tany Amboasary Avaratra, distrikan’Anjozorobe.
Zazalahy hita faty Tsy nisy maso sy lela intsony
Nitrangana toe-javatra mampalahelo tany amin’ny kaominina ambanivohitra Angarahara, distrikan’Ihorombe ny herinandro teo.
Fitsarana any Toamasina Tsy hita popoka ireo "dossiers" hitsarana an'i Modjize Hassan
Hatairana ny nahazo ny vahoakan'i Toamasina, afak’omaly, tao amin'ny tribonalin'i Toamasina. Voatondro fa ny datin'ny alakamisy 15 novambra ny hiakaran'ny raharahan'ilay teratany Karana malaza ho mpanefohefo sy mahitahita ary mpihetraketra amin’ny fiarahamonina any an-toerana.
Fihaonamben’ny Eveka eto Madagasikara “Tsy misy hasina intsony ny aina”
Mikorosy fahana tanteraka ny fiainantsika Malagasy ankehitriny. Mbola mahazo tatitra maro mampihoronkoditra izahay noho ny fikorontanan’ny toe-tany sy ny toetr’andro.
Rallye RIM 2017 Tafapetraka ny « Appel » nataon’ny ekipazy Yves sy Nitro
Tontosa tetsy amin’ny Lapan’ny tanàna tetsy Analakely ny fanolorana ireo amboara tamin’ny fifaninanana rallye RIM andiany faha-38 notontosaina ny 10,11 ary 12 novambra 2017 teto Antananarivo afa-tsy ny an’ny « classe M 4 » sy ny filaharana ankapobeny noho ny fametrahana fitarainana nataon’ny ekipazy N°10 dia Yves sy Nitro nitondra Subaru.
Rugby eny amin’ny kianjan’i Makis Hitohy indray ny fifanintsanana
Araka ny vaovao marim-pototra azo dia hanatanteraka fivoriambe na AG ny eo anivon’ny tontolon’ny taranja Rugby à XV araka ny fampiantsoana nataon’ny Malagasy Rugby ka ny zoma faha-24 novambra ho avy izao no hanatanterahina izany.
Edito Mifehy vahoaka sisa
Na toy inona na toy inona fanazavana omen’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny dia tsy mety voafehy ny loza mitatao eto amin’ny firenena.
Hetsika ‘Lay tsena B Hametraka ny kalitao Malagasy amin’ny toerany
Ny 8 ka hatramin’ny 10 desambra izao no hotontosaina etsy amin’ny tanàna Voara Andohatapenaka ny hetsika ‘Lay tsena B. Varotra fampirantiana handraisana tranoheva miisa 300 anjara izy ity.
Vondrona STAR Hentitra amin’ny kalitaon’ny entana amidiny
Tanterahina nanomboka omaly zoma etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ary hifarana anio sabotsy ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny sakafo .
Tontolon’ny kolontsaina eto Madagasikara Tsy mandroso, hoy i Titane Pigny
Boky faha 5 navoakan’ilay mpanoratra Titane Pigny ary nampahafantarina tetsy amin’ny Hotely Colbert omaly ny “L’abécédaire” na “Ny ABD”
Rasoamanitrandrasana Onintsoa Daniella Vonona hitondra avo ny anaram-boninahitr’Atsimondrano
Tovovavy kely vao 20 taona monja Rasoamanitrandrasana Onintsoa Daniella, monina eny Andoharanofotsy.
Teatra Malagasy Nofoanana ny hetsika Faha-10 taona nahafatesan’i Victor Solo
Na dia eo aza ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Fikambanan’ny Mpanao Teatra Malagasy tarihan’i Mbato Ravaloson hanamarika ny faha-10 taona nahafatesan'i Victor Solo andrarezin'ny teatra malagasy (2007-2017) noho ny fiaraha-miasa tamin'ny tompon'andraikitry ny Ivokolo Cemdlac izay saika ho tanterahina amin’ny alahady 26 novambra 2017 ary namaritana ny hiseharana ny tantara Kapoaka sa Vahoaka ?
Bruno Ravelonanosy Ahiana ny ainy…
Araka ny loharanom-baovao tamin’ny olona akaiky azy dia misy ny tambazotrana teratany vahiny izay ahiana ho mikononkonona famonoana olona voaomana ka hamerina ny zava-nitranga fony nahalavo ny minisitry ny mponina teo aloha,
Ady amin’ny tsy filaminana Mila fiovana sy fahavononana
Tsy mahomby ny politika momba ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana matoa tsy mandry tahaka izao ny tany, ary mandry andriran’antsy andro aman’alina ny Malagasy.